Akụkọ - Gịnị Bụ Oké Ihe?
Gịnị Bụ Egwuregwu?
KC na-agba ọsọ
Furfural bụ kemịkal sitere na ihe a na - emepụta nke a na - emepụta maka ebumnuche ụlọ ọrụ. Ebumnuche ya bu ihe ndi oru ugbo dika oat husks, bran, corncobs na sawdust. Fọdụ ngwaahịa a na - eji ya gụnyere egbu ahịhịa, fungicide na ihe mgbaze. Ọ bụkwa ihe a maara nke ọma na imepụta mmanụ ụgbọ njem na na ntinye nke ịmịcha mmanụ. Chemical ahụ bụ mmewere na mmepụta nke ọtụtụ ndị ọrụ mmepụta ihe ndị ọzọ.
urfural bụ kemịkal sitere na ihe ọkụkụ nke emepụtara maka ebumnuche ụlọ ọrụ.
Mgbe a na-emepụta ọtụtụ ihe, a na-eme kemịkal site na itinye pentosan polysaccharides site na usoro nke acid hydrolysis, nke pụtara na cellulose na starches nke ihe ndị bụ isi na-agbanwe shuga site na iji acid. N'ime akpa a na-ekpo ọkụ, furfural nwere viscous, enweghị agba, yana mmanu, ma nwee mmanụ almọnd. Ihe ngosi nke ikuku nwere ike ime ka mmiri mmiri dị na ndo site na odo na agba aja aja.
Furfural dịtụ soluble mmiri na soluble kpamkpam na ether na ethanol. Na mgbakwunye na ojiji ya dị ka kemikal chemical, ọ na-eji na mmepụta nke Chemicals dị ka oghe, furfuyl, nitrofurans, na methylfuran. A na-ejikwa kemịkal ndị a n'ịmepụta ngwaahịa, gụnyere kemịkalụ ọrụ ugbo, ọgwụ, na ndị na-edozi ahụ.
E nwere ọtụtụ ụzọ ụmụ mmadụ na-esi enweta ihu na ntutu isi. Na mgbakwunye na ikpughe na kemịkal n'oge nhazi, enwere ike ịchọta ya n'ụzọ dị iche iche n'ọtụtụ nri. Ikpughe ọkụ nke ọdịdị a egosighi na ọ ga-emerụ ahụ.
Nnukwu ikpughe na furfural nwere ike ịbụ nsi. N'ime nyocha ụlọ nyocha na ụmụ mmadụ na anụmanụ, a chọpụtara na furfural bụ ihe na-akpata akpụkpọ ahụ, akpụkpọ anụ mucous, na anya. O kwukwara na ọ kpataara ahụ erughị ala na akụkụ iku ume. Fọdụ kọọrọ mmetụta dị mkpụmkpụ nke ikpughe na kemịkal na mpaghara ndị na-enweghị ikuku ventilash gụnyere nsogbu iku ume, ire dara ụda, na enweghị ike ịnụ ụtọ. Omume ogologo oge nke ụdị ikpughe a nwere ike ịdị site na ọnọdụ akpụkpọ ahụ dịka eczema na ntinye ihe nchoputa nke foto na nsogbu nsogbu na edema pulmon.
Ebube Furfural malitere nke ọma na 1922 mgbe Quaker Oats Company malitere ịmepụta ya na oat hull. Oats na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị ewu ewu iji mepụta kemịkal. Tupu mgbe ahụ, a na-eji ya mgbe niile n'ụdị ụfọdụ nke ihe na-esi ísì ụtọ. Emepụtara ya na 1832 site n'aka Johann Wolfgang Döbereiner, onye German ọkà mmụta ọgwụ nke na-eji ozu anụ ahụ emepụta mmiri acid, nke furfural bụ nke ngwaahịa. Ekwenyere na ndanda ndị a arụpụtara ọrụ kemikal n'ihi na ahụ ha nwere ụdị ihe ọkụkụ eji arụ ọrụ ugbu a.
Post oge: Ọgọstụ-13-2020